Home > safarka Europe > Waa xaggee marinnada tareenka ugu caansan iyo Historical
No, safarka loogu tala galay ku riyaaqayaa safarka. Xirxiraan in dogob, iyo sida macquulka ah jiheeyaha iyo dhowr khariidado fiican. Safarka macnaheedu socday meel aad ninna ogaa, halkaas oo xataa hawada dareemay qalaad iyo guriga warqad aad timaado laga yaabaa in kaliya ka dib markii aad soo laabtay.
Tani inta badan hubaal laab kor u sida taariikhda taariikhi ah! Tani sida macquulka ah waa ugu Wadooyinka oo caan ku Historical tareenka iyo a tareen taataabtay wadada dunida oo dhan. Waxaa ka tegey Paris on wadada magaaladii Byzantine ee Istanbul. Waxaad by yaabaa tigidh caadiga ah ka SaveATrain in ay u safraan wadada this, ama doorato ikhtiyaarka more soo jiidasho leh iyo bood ah oo ku saabsan Orient Express. mu'aamaraad ee tareenka raaxo this waxaa famously waxyoonay Agatha Christie. Maalmahan waxaa mar dambe shaqeeya Qaabkiisu weli ay ruuxa ku nool in Belmond ee Venice-Simplon Orient Express. Waxaa jira laba tareenada, dhab ahaan, mid ka mid ah la gaadhifardood shukaansi ka 1920 iyo 30meeyada oo kale waa tareen British Pullman taariikhi ah.
Sidaas, waxa dhacaya marka aad u hesho in ay Ferry ah? Nasiib wanaag rakaabka tareenka awoodaan si ay u helaan off tareenka oo wuxuu ku raaxaysan muuqaal ah mar saarnaa doon ah. Waxaad gudbi doontaa badda Baltic in 45 daqiiqo. The safar tareen oo dhan socdaa 4 saacadood oo 45 daqiiqo. Copenhagen ay galley furan-soo foodsaarayso ismaris iyo bilicsanaanta design cajiib ah waa macquul ah tigidhada tareenka ka nool Hamburg iska, Germany in aad karo Dabcan, gadashada naga, waxaad yeelan doontaa badhan dhamaadka post blog this.
Safraya xagga bari ka Zermatt, daboosho safar dheer maalin- 91 sugnan iyo 291 buundooyinka sida tirsan Isbahysiga seeraha Alpine ee la soo dhaafay koonfurta Switzerland ee, sanayd harooyinka buur, iyo tuulooyinkoodii sawir-kaamil ah. Warbixinta kooban ee safarka ka mid ah Oberalp Pass, meesha ugu sarreysa safarka ee 6706 feet. Kale oo caan ah Landwasser Viaduct - a heer sare ah lix xafiiltamaan dhismeedka taagan 200 cagaha iyo suuroowdo galay tunnel gooyaa si toos ah Buurta.
West Highland Line, Glasgow in Mallaig - Scotland
Waxaan hadda caadaysatay taxanaha TV-ga Outlander, kaas oo diiradda on jir-dugsiga Scotland jooggiisu. Sidaas daraaddeed waxaa layaabna ma leh this waa on liiska Wadooyinka oo caan ku Historical tareenka. The Line West Highland waa dariiqa ugu wanaagsan in aad la kulanto duurjoogta ah ee dalka, xeebaha galbeedka. Marka tareenka ka baxo Glasgow - magaalada ugu weyn Scotland ee - muuqaalkii magaalooyinka si degdeg ah succumbs in khabiir glens iyo lochs xasilloon. cinwaanka woqooyi, Highland Line Galbeedka maraa cidlada fog oo Rannoch Moor. Waxaa markaas ag maraaba ku Dhuur Ben Nevis, taabashada hoos ku Fort William. Mase jihada iyo dhaqaaqin galbeed, tareenka mara Viaduct Glenfinnan ah (saftay ah Harry Potter film taxane) ka hor yimid dekedda nool ee Mallaig.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#caanka ah #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys TrainStation talooyin tareenka tareen safarka